विज्ञान र प्रविधि – Yess Khabar
२९ माघ २०७५, मंगलवार ०३:५५२९ माघ २०७५, मंगलवार ०३:५५२९ माघ २०७५, मंगलवार ०३:५५ by Yess KhabarNo Comments
आयो यस्तो नयाँ प्रविधि लामो दूरीका गाडीमा दुई चालक भए नभएको अब इण्टरनेटबाटै जाँच गर्ने सकिने
अब तपाईँको गाडी इण्टरनेटबाटै जाँच हुनेछ । लामो दूरीका गाडीमा दुई चालक भए नभएको, चालकले कति दूरीसम्म गाडी चलाएको, चालक परिवर्तन भए नभएको लगायत जाँच इण्टरनेटबाटै हुनेछ । तपार्इँ गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ अथवा गाडीको मालिक हो भने अब तपाईँ ट्राफिक पुलिसको आँखाबाट टाढा रहन सक्नुहुनेछैन । ट्राफिक पुलिसले यसका लागि सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सुरक्षित यात्राका लागि ‘ट्राफिक कम्युनिकेशन एप्स’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । ट्राफिकले आफ्नो क्षमतामा विकास गरी डिजिटाइजेशन माध्यमद्वारा सवारी साधन र चालकलाई निगरानी गर्नेछ । यो एप्सले तपाईँले गाडी कति समय चलाउनुभयो, चालक परिवर्तन गर्नुभयो कि भएन भन्ने लगायत जानकारीसँगै चालकको तस्वीरसहितको सबै कुराको अभिलेख राख्नेछ । नियम पालना गर्नुभएको छैन भने एप्स जानकारी दिनेछ र सोही आधारमा सवारी चालकलाई कारवाही गरिनेछ । यदि कारवाहीबाट बच्न तपाईँ चाहनुहुन्छ भने ‘ट्राफिक कम्य
२२ माघ २०७५, मंगलवार ०४:५८२२ माघ २०७५, मंगलवार ०४:५८२२ माघ २०७५, मंगलवार ०४:५८ by Yess KhabarNo Comments
आयरल्यान्डको आकाशमा देखियो अनौठो चम्किलो वस्तु
आयरल्यान्डको आकाशमा अनौठो चम्किलो वस्तु देखिएको छ । आयरल्यान्डको आकाशमा अचानक चम्किलो प्रकाश र उडान तश्तरी युएफओ (अनआइडेन्टिफाइ फ्लाइङ अब्जेक्ट) देखिएको भन्दै अनुसन्धान शुरु भएको छ। स्थानीय सयमअनुसार शुक्रबार बिहान ६ बजेर ४७ मिनेटमा ब्रिटिश एयरवेजकी पाइलटले सबैभन्दा पहिले पश्चिम दक्षिण तटीय क्षेत्रमा चम्किलो प्रकाश र उडान तश्तरी देखिएको जानकारी शानन एयर ट्राफिक कन्ट्रोललाई गराएकी थिइन्। त्यसपछित्यस क्षेत्रमा उड्दै गरेका अन्य केही विमानले पनि त्यस विषयमा ट्राफिक कन्ट्रोललाई जानकारी गराएका बिबिसिले जनाएको छ। ब्रिटिश एयरवेजकी पाइलटले ट्राफिक कन्ट्रोलसँग सम्पर्क गरेर त्यस क्षेत्रमा ‘केही वस्तु तीव्र गतिमा उडिरहेको देखिएको’ जानकारी ट्राफिक कन्ट्रोललाई दिएकी थिइन। उनले ट्राफिक कन्ट्रोलसँग ‘त्यस क्षेत्रमा सैनिक अभ्यास भैरहेको हो’ भनेर सोधेकी थिइन्। ट्राफिक कन्ट्रोलले भने सैनिक अभ्यास नभएको जान
१८ माघ २०७५, शुक्रबार ०८:५०१८ माघ २०७५, शुक्रबार ०८:५०१८ माघ २०७५, शुक्रबार ०८:५० by Yess KhabarNo Comments
मः मः को अचार कसरी बनाउने ?
सुरुमा मः मः को अचार बनाउनका लागि आवश्यक सामाग्रीहरु १ भटमास २ तिल ३ अदुवा र लसुनको पेष्ट ४ धनिया ५पधिना ६ कागतिको रस ७ नुन ८ बेसार ९ जिरा १० खोसानीको धुलो ११ काटेको टमाटर १२ पनि मः मः को अचर बनउने प्रक्रिया यस प्रकार रहेको छ ः १ सुरुमा भटमास र तिल भुटनुहोस र सेलाउनुहोस २ त्यस पछि मिक्चरमा राखेर पिसनुहोस ३ अब मसला बनाउन सुरु गनुहोस ४ पहिला खोर्सानि खारनुहोस त्यस पछि जिरा लसुन र अदुवाको पेष्ट राखेर चलाउनुहोस ५ हल्का ब्राउन भएपछि बेसार राख्ने ६ त्यस पछि काटेको टमाटर राखेर चलाउनुहोस ७ नुन, खोर्सानि,र क्रमशः चलाउनुहोस र ५ मिनेट छोपेर राख्नुहोस ८. ५ मिनेट पछी कागतिको रस राख्नुहोस र क्रमशः धनिया पधिना राख्नुहोस अनि भटमास र तिलको धुलो राख्ने त्यसपछि अलिकति तातो पनि राखेर मिक्स गर्न अब मः मः अचार तयार भयो यसरी मः मः अचार बनाउन सकिन्छ । https://youtu.be/9s3SceT5kKk
१७ माघ २०७५, बिहीबार ०३:३११७ माघ २०७५, बिहीबार ०३:३११७ माघ २०७५, बिहीबार ०३:३१ by Yess KhabarNo Comments
खुल्दै छ अन्तरिक्षमा भव्य होटल, एक रातको मूल्य सुनेरै होश उड्छ
एजेन्सी। अमेरिकका केही निजी कम्पनी आम मानिसलाई अन्तरिक्षको अनुभव दिलाउने प्रयासमा जुटेको छ। अमेरिकाको टेक्ससको कम्पनी ओरियन स्पेसले आफूले पहिलो पटक अन्तरिक्षका आलिशान होटल बनाउ गइरहेको दाबी गरेको छ। यो होटल २०२१मा संचालमा आउने दाबी गरिएको छ। यो होटल २०२२ देखि आम मानिसकालागि खुला गरिनेछ। एक अंग्रेजी संचारमाध्यमका अनुसार यो होटलको नाम Aurora Station राखिने भएको छ। यो होटलमा बस्नेले राम्रै पैसा चुक्ता गर्नुपर्छ। यो होटलमा बस्नकालागि दुई क्रु मेम्बर र चार यात्रीकालागि मात्र ठाउँ हुनेछ। यो होटलको यात्रामा करिव १२ दिनको समय लाग्ने अनुमान छ। कम्पनीको दाबी अनुसार मानिसहरुले अन्तरिक्षका खुल्ने होटलमा जानकालागि वेबसाइटमा बुकिङ सुरु गरिसकेका छन्। कम्पनीको दाबी अनुसार उक्त होटलमा बस्दा २४ घण्टामा करिव १६ पटक सूर्योदय र सूर्यास्त देख्न पाइन्छ। करिव दुई वर्ष पनि रुसले पनि अन्तरिक्षमा यस
१६ माघ २०७५, बुधबार ०६:०६१६ माघ २०७५, बुधबार ०६:०६१६ माघ २०७५, बुधबार ०६:०६ by Yess KhabarNo Comments
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले लाभ, लागत र व्यापारिक कार्ययोजनाको विश्लेषण गरेर चौथो पुस्ताको (फोर जी) सेवालाई एक वर्षभित्र देशव्यापी रुपमा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको मंगलबारको बैठकले न्यून लागतमा फोर जी सेवा विस्तार गर्न, व्यावसायिक कार्ययोजना बनाउन र लागू गर्न तथा प्रविधिको भरपुर प्रयोग गर्न समेत निर्देशन दिएको हो। समितिले फोर जी सेवा विस्तारबाट आगामी पाँच वर्षमा नेपाल टेलिकमको वित्तीय अवस्था सुदृढ भई सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व र लाभांश दोब्बर हुने आधारसहितको विश्वसनीय व्यावसायिक योजना बनाई लागू गर्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए। नेपाल टेलिकमको फोर जी सेवा विस्तार गर्ने निर्णय लिँदा हाल प्रक्रियामा रहेको ठेक्कालाई निरन्तरता दिने वा प्रविधिको स्तर वृद्धि गरी फोर जी सेवा उपलब्ध गराउने वा कानूनबमोजिमको सबैभन्दा छो
१४ माघ २०७५, सोमबार ०४:४४१४ माघ २०७५, सोमबार ०४:४४१४ माघ २०७५, सोमबार ०४:४४ by Yess KhabarNo Comments
विज्ञानले भन्छ – वैवाहिक जीवनभन्दा एकल जीवन उत्तम हुन्छ
सामुदायिक मूल्य मान्यता पालना गर्नुपर्ने यो समाजमा ‘एकल व्यक्ति’ जहिले पनि जिज्ञासाको विषय बन्न पुग्छ। अनि एकल व्यक्तिलाई यो समाजले हेर्ने दृश्टिकोण पनि फरक हुन्छ! एकातर्फ इन्टरनेटभरी नै एक्लै हुनेहरूले गुनासो गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सारा विश्व नै भ्यालेन्टाइन दिवसलाई भव्य रूपले मनाउने तरखर गरिरहेका छन्। यसैक्रममा, ‘साइकोलोजी टुडे’मा प्रकाशन भएको अनुसन्धानको एक रिपोर्टले भने एकल हुनुका केहि फाइदाहरूलाई टिपोट गरेको छ। “एकल व्यक्तिहरू अरूभन्दा लचिलो हुन सक्छन्” विज्ञहरू भन्छन्, एकल व्यक्तिहरूले कुनै पनि जटिल मुद्दामामलालाई विवाहित व्यक्तिले भन्दा सजिलो तरिकाले हल गर्न सक्दछन्। सायद यो कुरा ठीकै हुन सक्छ, किनभने विवाहितले जस्तो एकल व्यक्तिले भावनात्मक झञ्झटलाई बेहोर्नुपर्दैन र वैकल्पिक ढङ्गले जुनकुनै अवस्थालाई पनि सामना गर्न सक्दछ। “एकल व्यक्तिहरू सामाजिक क्रियाकलापमा बढि अ
११ माघ २०७५, शुक्रबार १०:०९११ माघ २०७५, शुक्रबार १०:०९११ माघ २०७५, शुक्रबार १०:०९ by Yess KhabarNo Comments
सिन्दुर किन लगाइन्छ ? यस्ताे छ हिन्दु महिलाले पहिरिने सिन्दुरको वैज्ञानिक कारण !
हिन्दु महिलाको पहिरिने सिन्दुर, चुरा, मंगलसुत्र, औठी र पाउजुलाई कतिपयले फेशनभन्दा बढी केही सोच्दैनन् । यतिसम्मकी आफ्ना बुज्रकहरुको भनाइलाई धारणा बनाउँदैं महिलाहरु पनि फेसनका रुपमा यी गहनाहरु पहिरिने गरेका छन् । तर, सिन्दुर, मंगलसुत्र, चुरा, औठी र पाउजुसँग जोडिएको वैज्ञानिक सत्य निकै कम मानिसहरुलाई मात्र थाहा छ । किन लगाइन्छ सिन्दुर ? सदियौंदेखि विवाहिता हिन्दु महिला सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँदैं आएका छन् । सिन्दुर शिरलाई दुई भाग पारेर बीचौ हिस्सामा लगाइन्छ । यस विन्दुलाई महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिन्छ । यस ठाउँमा सिन्दुर लगाउनाले सधैं सर्तक र सक्रिय रहने वैज्ञानिक कारण रहेको छ । वास्तवममा सिन्दुरमा ‘मर्कती’ हुन्छ जो एकमात्र यस्तो धातु हो जो तरल पदार्थका रुपमा पाइन्छ । यही कारण हो कि सिन्दुर लगाउँदा शितलता मिल्छ र दिमाग तनावमुक्त हुन्छ । सिन्दुर विवाहपछि लगाइन्छ किनकी मानिन्छ विवाहपछि म
११ माघ २०७५, शुक्रबार ०५:१३११ माघ २०७५, शुक्रबार ०५:१३११ माघ २०७५, शुक्रबार ०५:१३ by Yess KhabarNo Comments
मोबाइलबाट कम पैसामा इन्टरनेट चलाउनको लागि अब यसो गर्नुहोस्…….
के तपाईले मोबाइलबाट इन्टनेट चलाउँदा धेरै पैसा काटेको अनुभव गर्नु भएको छ । कतिपयले धेरै पैसा काटेको भन्दै मोबाइल सेवा प्रदायकहरुप्रति नकारात्मक धारणा समेत राख्न्ने गरेको पाइएको छ । तर, कतिपय अवस्थामा तपाईको गल्तीले गर्दा पनि धेरै पैसा काटिरहेको हुन सक्छ । यदी तपाईले स्मार्ट फोन प्रयोग गर्नु हुन्छ भने तपाईको मोबाइलमा रहेका विभिन्न एप्लिकेशन स्वत रुपमा अपडेट हुने हुँदा डेटा प्रयोग भइरहेको हुन सक्छ । अथवा इन्टनेट सुचारु हुँदा तपाईले इन्टरनेट प्रयोग नगरेपनि डेटा ट्रान्सफर भइरहेको हुन सक्छ । जसलाई ब्याक फम डेटा भनिन्छ । र, सो डेटा प्रयोग भएअनुसारको शुल्क ब्यालेन्सबाट काटिएको हुन्छ । यस प्रक्रियालाई रोकि अतिरिक्त शुल्क लाग्नबाट जोगिन यी तरिका अपनाउन सकिन्छ । तपाईको फोनको शुल्कमार्फत विभिन्न एप्लिकेशनहरु स्वत अपडेट हुन नदिनका लागि एप्लिकेशन सेटिङमा गई अटोमेटिक अपडेट अफ गर्नुपर्छ । वा डेटा प्रय
१० माघ २०७५, बिहीबार १०:००१० माघ २०७५, बिहीबार १०:००१० माघ २०७५, बिहीबार १०:०० by Yess KhabarNo Comments
यी ७ ऋषिमुनि जसले वैज्ञानिक भन्दा पहिले आविष्कार गरेका थिए,
७ ऋषिमुनिहरु जसले वैज्ञानिक भन्दा पहिल्यै आविष्कार गरेका थिए..विज्ञानमा पश्चिमी देशहरु सधै अगाडी भए तर आजकलभएका ठुला ठुला सवै जसो आविष्कारकहरु उतैका छन्,कम्तिमा हामीले यस्तै पढ्दै आएका छौ ।तर तपाईलाइ विश्वास नलाग्ला आधुनिक विज्ञानले पत्ता लगाएका भनिएका कयौं कुराहरु हाम्रै ऋषिमुनिले हजारौ वर्ष पहिले पत्ता लगाइ सकेका थिए। त्यसैले होला कतिपय सन्दर्भमा पश्चिमाहरु वेदबाट प्रभावित भएको समेत सुनिने गरेको छ। यहाँ चर्चित सात वैज्ञानिक ऋषिमुनिहरु प्रस्तुत गरिएको छ जसले धेरै पहिले आज भएका भनिएका कुराहरु हजारौ वर्ष पहिले आविष्कार गरेका थिएः भाष्कर्याचार्य यो संसारमा पृथ्वीको गुरुत्वआकर्षण शक्ति पत्ता लगाउने श्रेय न्युटनलाई दिइन्छ। तर निकै कम मानिसलाई थाहा छ ऋषि भाष्कराचार्यले न्युटन भन्दा हजाराैं वर्ष पहिले उजागर गरिसकेका थिए। भाष्कराचार्यले आफ्नो किताब ‘सिद्धान्तशिरोमणि’ ग्रन्थमा गुरुत्वाकर्
१० माघ २०७५, बिहीबार ०६:२०१० माघ २०७५, बिहीबार ०६:२०१० माघ २०७५, बिहीबार ०६:२० by Yess KhabarNo Comments
पढेको कुरा सम्झिने १० सुत्र, हरेक विध्यार्थीले जानी राखौँ !
१.अन्डरलाइन गरेर पढ्ने कतिपयको बानी पढ्दै अन्डरलाइन गर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा अर्काे पटक आफुलाई चासो लागेको विषय खोज्न सजिलो हुन्छ । परीक्षा दिने केही दिनअघि अन्डरलाइन गरेको विषय दोहो¥याउँदा सम्झन सजिलो हुन्छ । २. आफ्नो नोट आफैँ बनाउने धेरैले परीक्षा आउने बेला साथीभाइसँग नोट मागेर पढ्ने गर्छन् । आफैँले नोट बनाउँदा सम्झन सजिलो हुन्छ । शिक्षकले भनेको केही प्वाइन्टको प्रयोग गर्ने र आफ्नै भाषामा नोट बनाउने विधी सजिलो हो । आफूले लेखेको कुरा प्रायः बिर्सिइन्न । ३. लेख्ने पूर्वाभ्यास पढेर एकैचोटी परीक्षामा मात्र लेख्ने बानीले राम्रो नतिजा आउँदैन । परीक्षा दिँदा एउटा प्रश्न कम्तीमा ३ चोटी अभ्यास गर्दा सजिलो हुन्छ । घरमा पहिले नै प्रश्न बनाएर खभ्यास गर्दा आत्मवल समेत बढ्छ । ४. सर्टकट बनाएर पढ्ने कतिपय फर्मुलाका बुँदा लामो र दिक्कलाग्दा हुन्छन् । सम्झन अप्ठ्यारो हुन्छ । इतिहास,